भारतले क’ब्जा गरेको सन्दकपुरमा अनेरास्ववियूले गाडे राष्ट्रिय झण्डा ! – दैनिक नेपाल न्युज
भारतले क’ब्जा गरेको सन्दकपुरमा अनेरास्ववियूले गाडे राष्ट्रिय झण्डा !
प्रकाशित द्वारा: आइतवार, मंसिर १, २०७६
काठमाडौँ । भारतले अतिक्रमण गरेको पूर्वी नेपालको सन्दकपुर क्षेत्रमा अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियू)ले आज नेपालको झण्डा गाडेको छ । इलामको सन्दकपुर गाउँपालिका–४ मा भारतले अतिक्रमण गरेको भूमिमा अनेरास्ववियु इलाम जिल्ला कमिटीले राष्ट्रिय झण्डा फहराएको हो ।
जनताले वैकल्पिक शक्ति खोजेका छन्ः साझा उम्मेद्वार केसी